Creative Space Design: စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ
Creative Space Design
Creativity in architecture involves the ability to create mental images of arrangements and forms not yet seen. Creative imagination is the ability to present new patterns, use new objects, and invent new configurations. Thus, creativity and imagination both relate to the forces that cause isolated and unrelated factors to come together into arrangements of cohesive unity and beauty.
Designer တစ်ယောက်ဟာ Design ပညာကိုတတ်မြောက်ရုံနဲ ့မလုံလောက်ပါဘူး။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတဲ့ Management အတတ်ပညာကိုလဲ တတ်မြောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ Management ကိုမသိဘူ၊ နားမလည်ဘူး ဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Management ဆိုတာဘာလဲ?? ဘာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှာလဲ?? လေ့လာကြည့်ကျရအောင်နော်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော အင်အားစုပေါင်းစုံကို စုပေါင်းပြီ လျှင် လုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးသော နည်းကို အသုံးပြုနိုင်အောင် ဦးဆောင်မှု ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲရာ၌ အရေးကြီးသောအချက်မှာ ဦးဆောင်မှုပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိမိလက်အောက်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြီးကြပ်မှသာလျှင် စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်သည်မည်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ချက်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းသည် စီမံခန့်ခွဲမှု မမည်ပေ။
စီမံခန့်ခွဲမှု ပါရဂူအချို့၏ အဓိပါယ်ဖော်ပြချက် အချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ပြရမည် ဆိုလျှင်-
(၁) စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာ တိကျစွာ သိရှိသဘောပေါက်သော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့့ သက်ရှိသက်မဲ့ အင်အားစုများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်အောင် ဆန်းစစ်မှုများ၊ ပြဋ္ဌာန်းမှုများ၊ စီမံမှုများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများ၊ အကဲဖြတ်မှုများ နှင့် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သော လူတို့၏ဉာဏစွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) လုပ်ကိုင်ရန်ရှိသော လုပ်ငန်းတာဝန်အားလုံးကို ကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(၃) စုပေါင်းရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့ ဦးတည်ရောက်ရှိနိုင်ရန် လူတစ်စုကို ရှေ့ဆောင်လမ်း ပြခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် ယင်းတို့၏လုံးလဝိရိယကို ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
(၄)လေတပ်အတွက်ဆိုလျှင် စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိနိုင်ရန် အင်အားစုအားလုံးကို စနစ်တကျ စီမံ ဖွဲ့စည်း အသုံးချခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ စီမံခန့်ခွဲသောပုဂ္ဂိုလ်သည် ပထမဦးစွာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် သတ်မှတ်ရန်လိုပါသည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ချမှတ်ပြီးမှသာလျှင် ရှေ့တိုးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ချမှတ်ရာ၌ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုမရှိပဲ ပြုလုပ်၍မရပါ။ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ချုပ်ချယ်မှုများ၏ ဘောင်အတွင်းမှသာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ရပါသည်။ ချမှတ်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် တိုင်းပြည်၏ အက်ဥပဒေများ လူတို့၏ထုံးတမ်းဓလေ့များ ဘာသာရေးအယူအဆများ ရပ်ရွာစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရန်လည်းလိုပါသည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ချမှတ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ အပြည့်အစုံပါရှိရန်အရေးကြီးပါသည်။ အတိုချုံးဆိုရပါလျှင်မြန်မာလို ဘ(၆)လုံးကိုမှတ်ထား၍ English လို W (၆) လုံးကိုမှတ်ထားရပါမည်။
၁။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်အောင် " ဘာ " လုပ်ရမည်နည်း။ What ?
၂။ လုပ်စရာရှိသည်တို့ကို " ဘယ်သူ" ကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်နည်း။ Who ?
၃။ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို " ဘယ်နေရာ " တွင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ Where ?
၄။ လိုအပ်သောတာဝန်များကို " ဘယ်အချိန်" မှာ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ When ?
၅။ တာဝန်အသီးသီးကို" ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ" ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း ။ How ?
၆။ မိမိတို့၏ တာဝန်များကို " အဘယ်ကြောင့် " ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း ။ Why ?
အထက်ပါမေးခွန်းများ၏ အဖြေမပါသော စီမံကိန်း(သို့) အစီအစဉ်သည် ပြည့်စုံလုံလောက် သော အစီအစဉ် (သို့) စီမံကိန်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆောက်အအုံတစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် ယင်းအဆောက်အအုံ၏ ပုံစံရေးဆွဲရုံဖြင့် စီမံကိန်းချမှတ်ပြီးပြီဟုမဆိုနိုင်ပေ။ ယင်းပုံစံပါ အဆောက်အအုံ အကောင်အထည်ပေါ်လာရန်-
(၆) ဘာကြောင့်လုပ်ကိုင်ရန်လိုသည် ဟူသောအချက်အလက်များကိုပါ ပူးတွဲဖော်ပြပေးမှသာ ပြည့်စုံသောစီမံကိန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်အောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နိုင်ပေမည်။
စီမံကိန်းချမှတ်ခြင်းကို အဖွဲ့အစည်းရှိအဆင့်တိုင်းတွင် အဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ အနာဂတ်တွင် လုပ်ကိုင်ရမည့် လုပ်ငန်းများအတွက်သာလျှင် စီမံကိန်းချ၍ရပါသည်။ ယခင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီးသော လုပ်ငန်းများနှင့် ယခုမျက်မှောက်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ အတွက် စီမံကိန်းချမှတ်၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် မပြုမီ စီမံကိန်းချမှတ်ရပါသည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် စီမံကိန်းချမှတ်ရာ၌ အစပထမတွင် အချိန်ကြာပြီး လူပင်ပန်းငွေကုန်သော်လည်း လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မူ ငွေကုန်သက်သာ လူလည်း မပင်ပန်းပဲ အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်မှု ရနိုင်စွမ်းရှိရန်များပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ထိန်းချုပ်မှုကို အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ယင်း၏ ထိန်းချုပ်မှုမှာအကန့်သတ်ရှိပါသည်။ အထက်အုပ်ချုပ်သောအပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစား၍ လုပ်ရသောတာဝန်များနှင့် စီမံကိန်းများကို လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် နေ့စဉ် သမားရိုးကျလုပ်နေရသော လုပ်ငန်းအတွက် အချိန်အနည်းငယ်သာပေးနိုင်ကျပါသည်။ ထိန်းချုပ်နိုင် သောလက်အောက်ခံ အရာထမ်း အမှုထမ်း အရေအတွက်မှာလဲ နည်းပါသည်။ လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုတွင် အောက်အဆင့်သို့ရောက်သွားလေလေ သမားရိုးကျလုပ်ရသော တာဝန်များလာလေလေဖြစ်ပြီး အသိဉာဏ် အသုံးပြုရသောလုပ်ငန်း နည်းပါလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်အဆင့်နိမ့်လေ ထိန်းချုပ်နိုင်သော ငယ်သားဦးရေများလာလေဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် လှုံ့ဆော်ခြင်း ( Motivating) အတတ်ပညာကိုလည်းတတ်‌မြောက် ရပါမည်။ ကာယ ဉာဏ လုပ်သားများအား အလုပ်ပေါ် စိတ်ပါဝင်စားအောင် အာရုံစိုက်မှုရှိအောင် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စွမ်းအားရှိရပါမည်။ လုပ်သားများကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် စိတ်ပါဝင်စားအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါက ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေခြင်း၊ လုပ်သားများ စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိခြင်း၊ ရိုင်းပင်းကူညီခြင်း၊ ထူးထူးချွန်ချွန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ထိပ်တန်းခေါင်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်အချက်က စေ့ဆော်ပေးပါသလဲဆိုသော မေးခွန်းအတွက် အဖြေကတော့ နောက်လိုက်ကောင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်လိုက်ကောင်းတို့ ရဲ့ရင့်ဖို့၊ ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့၊ ရိုးသားကျဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ချင်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
ချမှတ်ထားသောစီမံကိန်း မည်မျှပင်ကောင်းစေကာမူ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းနှင့်အတိအကျ ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကို တွေ့ရခဲပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပါတ်သက်၍သော် လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ယင်းသုံးခုစလုံးနှင့်ပါတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း ချွတ်ယွင်းချက်များ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ချွတ်ယွင်းချက်များရှိမရှိသိရှိရန်နှင့် ယင်းချွတ်ယွင်းချက်များ၏ အကြောင်းရင်းကို သိရှိနိုင်ရန် လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲရန် လိုပါသည်။ စီမံထားသည့်အတိုင်း လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြီးကြပ်ခြင်းသည် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှု ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ခြင်းသည် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ကိုက်ညီအောင်လုပ်ခြင်းသည်ကွပ်ကဲခြင်းဖြစ်၏။ ကွပ်ကဲခြင်းမရှိ ပါက ထိန်းချုပ်မှုသည် မပြည့်စုံပေ။ ထိန်းချုပ်ရာ၌ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသောစံနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စံဆိုသည်မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ခုက သတ်မှတ်ပေးထားသော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရေအတွက် အရည်အသွေး ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်တို့ကို တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်ရာ၌ လုပ်ငန်းဌာန၏ ရည်မှန်းချက်ပန်တိုင်နှင့် ကျင့်သုံးသောမူဝါဒ အပေါ် အမှီပြု၍ စံသတ်မှတ်ရပါသည်။ ထို့နောက် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုကို သတ်မှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်မှုစံချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရပါသည်။ တိမ်းစောင်မှုများရှိပါက မည်မျှတိမ်းစောင်းမှုရှိသည်၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်တိမ်းစောင်းမှုရှိသည်၊ မည်သို့မည်ပုုံ ပြုပြင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရပါသည်။ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုတာဝန်ကို ယူရန်လွယ်ကူပါသည်။ ကျင့်သုံးရာမူမလွယ်ကူပေ။
ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများမှာ စီမံကိန်းနှင့်လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်မှု အတိမ်းအစောင်းနဲပါးစေခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း နှင့် တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေခြင်းများဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ပါဝင်လုပ်အားပေးမည့်သူများ ရှိလင့်ကစား ဦးဆောင်မည့်သူမရှိပါက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိ ုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ခေါင်းဆောင်သူသည် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောအရည်အခြင်း ရှိရန်လိုပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ချမှတ်ပြီးသောအခါ ယင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သို့သော အဟန့်အတားများ၊ အခက်အခဲများ၊ အတားအဆီးများ၊ ပြဿနာများရှိမည်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရန်လိုပါသည်။ သုံးသပ်ပြီး၍ သိရှိလာသောအခါ ယင်းအဟန့်အတား အခက်အခဲ အတားအဆီး နှင့် ပြဿများကို ကျော်လွန်‌ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲ့မှု ( Management ) လိုလာပါတော့သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဟူသည် ဆုံးဖြတ်မှုပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင် ချက် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ဆုံးဖြတ်မှုပြုနေရပြီး ဆုံးဖြတ်မှုပြုခြင်း မရှိပါက စီမံခန့်ခွဲမှု အဓိက တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ဆုံးဖြတ်မှုပေးခြင်းဆိုတာကတော့ ကျင့်သုံးနိုင်သောနည်းလမ်း နှစ်ခု (သို့) နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်အနက် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စီမံခန်ခွဲသောပုဂ္ဂိုလ် သည် စံနှင့်လွဲချော်နေခြင်း (သို့) ဖြစ်သင့်သည်နှင့် ဖြစ်နေသည်တို့ လွဲချော်နေခြင်း တနည်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်များ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကွဲလွဲနေခြင်းဟူသော ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာပါကလဲ ချက်ခြင်း‌ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရပါမည်။ ဆုံးဖြတ်မှုပြုခြင်းကို အချိန်ယူဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း ပြဿနာကိုမူ စောင့်ဆိုင်း၍မရပဲ ချက်ခြင်း‌ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရပါမည််။
လူ့ဘောင်လောကတွင် နေထိုင်ကျကုန်သော လူသားအပေါင်းတို့သည် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်သောသူ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိပေ။ အရာရာတိုင်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုက ဦးဆောင်နေတတ်ပါတယ်။ လူတို့၏ဘဝ ရှုထောင့်အားလုံးတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ သို့သော် မိမိရဲ့ဘဝကို စနစ်တကျ စီမံခန် ့ခွဲတတ်သူ နှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို အလေးထားမဆောင်ရွက်သူတို့့၏ ဘဝလူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် များစွာကွာခြားခဲ့ရပေသည်။ ယနေ့ကမာ္ဘမှာ ထိပ်ဆုံးရောက် နေသူများရဲ့ အကြောင်းကို နဲနဲလောက် သင်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ ။ သူတို့ဘဝကို ဘယ်လိုရည်မှန်း ချက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့သလဲ ငယ်စဉ်အခါထဲက မိဘကဘယ်လို ထိန်းကျောင်းပေးခဲ့သလဲ သူတို့လျှောက်လှမ်းခဲ့ရသော လမ်းတလျှောက်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ မပါဝင်ပါဘူး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဟာ အရေးမပါပါဘူးလို့ သင်ငြင်းဆိုနိုင်ပါမည်လော………..
Reference : သင်တန်းတွင် သင်ကြားခဲ့ရသော မှတ်စုများအား ကိုးကားပါသည်။
Photo အား www.eeaust.com.au မှရယူပါသည်။
Posted by MTZO at 9:03 PM
Design Ideology Forum
Blog Archive September 2011 (1) May 2011 (1) April 2011 (2) March 2011 (1) January 2011 (1) December 2010 (3) October 2010 (2) March 2010 (5) February 2010 (1) January 2010 (1) December 2009 (5) November 2009 (4) October 2009 (3) June 2009 (5) April 2009 (1) February 2009 (1) January 2009 (21) December 2008 (1) November 2008 (1) October 2008 (3) September 2008 (1) August 2008 (1) July 2008 (1) June 2008 (1) May 2008 (6) April 2008 (19)
Design ideology News Letter